Dagaal u Dhaxeeya Maleeshiyaad hubaysan oo ka socda Dhuusa- – Radio Daljir
Maarso 2, 2016 1:55 b 0
Burtinle, 02-March, 2016 -(Daljir)_Dagaal xoogan oo u dhaxeeya Ciidamada Ahlu Sunna Waljamaaca iyo koox hubeysan oo daacad u ah Liiban Maxamud (Madax weyne) ayaa weli ka socda Magaalada Dhuusamareeb Ee Xarunta Gobolka Galguduud.
Dagaalka ayaa saaka la soo sheegaya iney ku soo biiren Ciidamo taabacsan Maamulka Galmudug sida ila wareedyo lagu kalsoon yahay ay u sheegen VOA.
Dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in Liiban Madax weyne uu u dagaalamayo qaab qabiil kadib markii uu diiday inuu Hubka ku wareejiyo Ahlu Sunna Waljamaaca.
Dagaalka oo Xalay saqdii dhexe bilaawday waxa uu ka dhashay muran la xiriiray Safar dhawaan Ahlu Sunna Waljamaaca ay ka hor istaagen Siyaasiga Axmed Cabdisalaam oo ay isku dhaw yihiin Liiban ( Madax weyne).
DHAGAYSO:Barlamaanka Somaliya oo Su’aalo weydiiyay wasiirka Amniga